Iindaba sesiXhosa ngo 11:00, 27 eyeNkanga 2018 – Zibonele FM | 98.2
Iindaba sesiXhosa ngo 11:00, 27 eyeNkanga 2018
Isilumkiso sokunqamka kombane kwiingingqi ezithile zaseKapa
Siqhuba uphando isixeko seKapa malunga nonobangela wokucima kombane kwiingingqi ezithile zaseMazantsi ommandla wePeninsula. Iindawo ezichaphazelekayo ziquka i-Scarborough, i-Fish Hoek, Retreat naseKirstenhof. Ilungu lekomiti kasodolophu kwinkonzo ezingundoqo unkosikazi Xanthea Linberg uthi kwimizuzu embalwa edlulileyo amagosa ezombane abe nakho ukubuyisela kwisimo esisiso umbane kwisikhululo sombane eMuizenberg kwaye kungokunje bazama ukubuyisela umbane kwezinye iindawo ezichaphazelekayo.
Izikile inqanawe kwizibuko lase Table Bay
Bahlangulwe abakhenkethi abahlanu belizwe laseBritani kulandela ukuphequka kwesikhutshane sabo ngethuba bengena kwizibuko laseTable Bay. Usomlomo weenkonzo zohlangulo elwandle umnumzana Craig Lambinon uthi omnye waba batyeleli kwakunye nabemi beli loMdibaniso ababini bafumene umonzakalo ongephi. Uthi abezohlangulo elwandle basebenze ngokukhawuleza ukuthintela isithwakumbe nanjengoko abahlanguliweyo bebesele befunyenwe yingqele emandla,ukugruzuka nomothuko. Aba bathunyelwe esibhedlele.
Mayinyuse iikawusi i ANC, itsho i COSATU
Umfelandawonye weemanyano zabasebenzi i-Cosatu ivakalis’amakhwiniba malunga nento eyibiza ngokuba kukungazinikeli ngokupheleleyo kweqela leANC ukwenza iinguqu kwindlela esebenza ngayo indibanisela kaNxantathu equka i-ANC njengenkokheli, i-Cosatu kwakunye namakomanisi elizwe loMzantsi Afrika i-SACP. Unobhala jikelele weCosatu ngumnumzana Bheki Ntshalintshali….bheki…Kusenjalo usekela nobhala jikelele wokuqala weSACP umnumzana Solly Mapaila uthi bayafuna ukusebenzisana neANC kodwa abanelisekanga yindlela esingethe ngayo umbandela wokwenziwa kweenguqu kwindlela yokusebenza kaNxantathu…Solly Mapail
uBheki Cele uzobe thetha ngoku nciphisa ubugebengu kwelaseKapa
Amalungu epalamente azakuva namhlanje ukuba liqhuba njani ibutho lamapolisa elichasene nemigewu. Ebutsheni bale nyanga umongameli Matamela Cyril Ramaposa ekunye nomphathiswa kwinkonzo yesipolisa unjengele Bheki Cele baphehlelele ngokusesikweni eli butho eKapa. Abasemagunyeni sele benethuba elide bephantsi koxinezelelo lokuba kutyalwe amagosa aqeqeshwe ngokukhethekileyo khon’ukuze abhinqise nelahle imigewu kwimimandla yephondo leNtshona Koloni. Kulindeleke ukuba umkomishinala wamapolisa kuzwelonke uLt Khehla Sithole acacise banzi malunga nenkqubela yeli butho.
Ithemba lokubuyiselwa komhlaba kubahlali base District six
Likho ithemba kumakhulu-khulu abafaki bebango lomhlaba baseDistrict Six. Abahlali ababekhutshwe ngetshova kulo mhlaba ngelixa lengcinezelo banethemba lokubuyela kuwo kwamsinyane. Oku kuza emva kwesigwebo senkundla ephakamileyo yephondo leNtshona Koloni esihambisana nebango labo lomhlaba. Inkundla iyalele umphathiswa wophuhliso lwamaphandle nenguqu kwezemihlaba ukuba avelise iqhinga lokubuyiselwa kwaba bahlali kumhlaba wabo nto leyo ingaphelisa ukuswantsulisana enkundleni okuthabathe ithuba elide. uRasmia Phillips oneminyaka engamashumi amathandathu anesithathu ubudala wakhutshwa ngosomvana eDistrict Six ngurhulumente wocalu-calulo, waza wayakuhlala eLentegeur ukususela ngoko kodwa namhlanje unethemba lokubuyela kwikhaya lakhe lamhla-mnene nanjengoko lisamile. Igqwetha elimele urhulumente kazwelonke kweli dabi uAdvocate Sean Rosenberg uvumile ukuba lubekho ulibaziseko lokubuyiselwa kwalo mhlaba kubanikazi bawo.
iQela le EFF libuye lisithi lizakuvula ityala lokrwaphilizo ngaku Gordhan
Umphathiswa wamaqumrhu karhulumente uthi iqela le-EFF lidala iyantlukwano nentiyo kwilizwe loMzantsi Afrika kwaye ukuqhubeka kwalo noku kungaqandusela ekonzakaliswe kungenjalo ukubulawa kwabantu. Umnumzana Pravin Gordhan ebethetha emva kokuvula ityala ngakwiinkokheli ze-EFF umnumzana Julius Sello Malema nesekela lakhe uFloyd Shivhambu. Eli qela liphendule ngelithi namhlanje lizakuvula ityala lobuqhetseba norhwaphilizo ngakuGordhan. uGordhan uthi iintetho zohlaselo lwekomishoni kaZondo kwakunye naye uqobo ziyinkxalenye yephulo le-EFF lokuphazamisana nomsebenzi wale komishoni. Ukanti, kwiveki ephelileyo iphephandaba i-Daily Maverick lidize ukuba iinkokheli zeEFF zixhamlile kwimali ehliswe ngomlenze kwibhanka i-VBS Mutual.